FJKM Merimanjaka Fiderana Manohitra ny amboletra hametrahana Mpitandrina
Tsy tafapetraka ary tsy ho tafapetraka hitandrina ao amin’ny FJKM Merimanjaka Fiderana, Synodam-paritany Antananarivo Atsimo, ny Mpitandrina
FJKM Merimanjaka Fiderana Mikorontana nidiran’ny « viriosy » ny fiainam-piangonana
Mikorontana ary anaty savorovoro tanteraka ny fiainam-piangonana ao amin’ny FJKM Merimanjaka Fiderana, Synaodam-paritany Antananarivo Atsimo amin’izao fotoana izao.
Apostoly Tsaratsara sy Pasitera Mailhol Samy nilaza ho voatendrin’ny Tompo hitondra an’i Madagasikara
Samy nilaza ho voatendrin’ny Tompo ho filoha hitondra ny firenena Malagasy avokoa ireo mpitondra fivavahana mirahalahy malaza eto amintsika ankehitriny dia ny Apostoly Tsaratsara sy ny Pasitera Mailhol raha nifandimby niditra tao amin’ny fandaharana manokan’ny televiziona tsy miankina iray eto an-drenivohitra tamin’iny herinandro lasa teo iny.
Fiangonana Katolika Miditra amin'ny iray volan'i Masina Maria
Ny volana mey dia volana natokan'ny Fiangonana Katolika hankalazana manokana an'i Masina Maria reny niteraka an'i Jesoa Kristy.
Filohan’ny FFKM Miantso ny hitsinjarana ara-dalàna ireo fanampiana
Mbola hitohy amin’ny alahady izao ny fotoam-pivavahana iarahan’ireo filoham-piangonana 4 mivondrona ao amin’ny FFKM ( Fiombonan’ny Fiangonana Kristiana eto Madagasikara) ao anatin’izao fihibohana izao.
Herinandro teo ho eo no nitsaboana azy farany tetsy amin’ny hôpitaly Befelatanana raha efa nahatratra enim-bolana kosa ilay aretina nandavo azy no nikiky ity Renim-pianakaviana ity. 55 taona Itompokovavy no nandao ny tany. Anisan’ny tena nahafantarana azy ny fijoroana vavolombelona nataony niaraka tamim-badiny mikasika ny tsiambarantelon’ny faharetan’ny tokantranon’izy ireo. Toraka izany koa ny fizarana fahendrena tamin’ireo Renim-pianakaviana tao anatin’ny finoana nisy azy, notronin’ireo tanora zazavavy marobe. Omaly Alahady moa no nalevina teny Ambohitsaratelo Andohatanjona ny razana. Namela kamboty roa sy zafikely iray ary mananontena iray Ratompokovavy.